Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Horohoron-tany tany California Nevada: 5.9
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Horohorontany mahery vaika 5.9 tamin'ny maridrefy no voarakitra ao amin'ny 3.52 hariva any Nevada, akaikin'ny Line of California State onSmith Valley.
Nisy horohoron-tany 5.9 norefesina tao Smith Valley, Nevada, tany amin'ny làlan'ny fanjakana California, Nevada tamin'ny 3:49 hariva Pacific TIme tamin'ny Alakamisy.
Tsapa tao Reno, Carson City ary Stockton ny horohoron-tany.
Tsy misy ny fahasimbana na ratra lehibe ateraky ny toerana lavitra ny horohoron-tany.
Smith Valley dia toerana voatondro ho fanisam-bahoaka ao amin'ny County Lyon, Nevada, Etazonia. Ny isam-ponina dia 1,603 tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010.
Mono County dia faritany iray ao amin'ny faritany atsinanana-afovoan'ny fanjakana Etazonia any California. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, 14,202 ny isam-ponina. manao azy ho faritany farafahakeliny misy mponina ao California. Ny sezan'ny distrika dia Bridgeport
Ny horohoron-tany tamin'ny 8 Jolay 2021 dia teo amin'ny sisin-tany teo anelanelan'ny distrika roa. Ny halalin'ny refy dia 61 kilaometatra.
Fampiasam-bola, Fitantanam-bola & Famerenana: Fampiasam-bola amin'ny fizahantany...